Home » သတင်း » IBC2016 မှာ ChyronHego
IBC2016 မှာ ChyronHego
စက်တင်ဘာ 9-13, အမ်စတာဒမ်
မီဒီယာကုမ္ပဏီကွာစီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲမော်ဒယ်များမှသည်နှင့် IT-ဗဟိုပြု, ဆော့ဖ်ဝဲ-based စစ်ဆင်ရေးဆီသို့ပြောင်းရွှေ့၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူထွေးဆက်လက်အဖြစ်, သူတို့ပြန်လာ၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ်။
IBC2016 မှာ, ChyronHego ယင်း၏ထုတ်လွှင့် Customer များအတွက် All-IP ကိုစစ်ဆင်ရေးမှလမ်းကြောင်းကိုဖြေလျော့သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Workflows တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပေါင်းစပ်အားလုံးသော, သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှု, ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ticker နှင့်ရာသီဥတုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ် ChyronHego'' s ကိုအဓိကထုတ်ကုန်မိသားစုအဖြစ်အသစ်နှင့်မကြာသေးမီကဝယ်ယူနည်းပညာများ။ ဥပမာတစျခုအသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖန်ဆင်းခြင်း Inc ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားကွင်းတင်ပြချက်များများအတွက်နှိပ်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ကုန်မိသားစု၏ထုတ်လုပ်သူများ၏ကုမ္ပဏီ၏အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်။
IBC2016 မှာ, ChyronHego'' s ကို CAMIO ဠာင်း၏ဥရောပပွဲဦးထွက်စေမည်။ အဆိုပါ CAMIO ဠာထုတ်လုပ်သူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများဆွဲဆောင်မှုသတင်းပုံပြင်များဖန်တီးသောလေလျှင်မြန်စွာသူတို့ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအာဏာတစ်ခုပြည့်စုံ software ကို-based သတင်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
CAMIO သာထိန်းချုပ်မှု ChyronHego'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်Lyric®ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးမှုပတ်ဝန်းကျင်ဒါပေမယ့်လည်းကုမ္ပဏီ၏ Hybrid ကိုကို virtual ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်သည် Metacast ရာသီဥတုဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်သည် PowerClips multiformat ထုတ်လုပ်မှုကလစ်ဆာဗာကိုယင်း GS2 Multi-အပါအဝင်တစ်သိသိသာသာတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ်အတွင်းအစွမ်းထက် template ကို-based ကိရိယာများ, ကမ်းလှမ်း Touch-screen ကိုမျိုးဆက်ပလက်ဖောင်း, အဖြစ် VidiGo တိုက်ရိုက်စာစီဗီဒီယို switching ဖြေရှင်းချက်ထိပါ။ CAMIO ထုတ်လုပ်သူများ, ဂျာနယ်လစ်များ, နှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများအဲဒီကိရိယာအားလုံးကိုချက်ချင်း desktop ကို access ကိုပေးသည်။
ChyronHego အဆိုပါဆုရ CAMIO ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဒေတာများစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်စွမ်းအားဖြင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းအဆုံးမှအဆုံးသို့သတင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသတင်းကဏ္ဍကိုထိန်းချုပ်စင်တာအဖြစ် CAMIO, ထိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Integrated နှင့်အတူ ChyronHego'' s ကိုကမ္ဘာ့ဦးဆောင်Lyric®ဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်စနစ်, တိုက်ရိုက်စာစီ multicamera တီဗီထုတ်လုပ်မှု, Metacast ရာသီဥတုဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် Hybrid ကိုကို virtual စတူဒီယိုနှင့်စက်ရုပ်ကင်မရာ-ခေါင်းကိုနည်းပညာများဘို့။ အဆိုပါရလဒ်တစ်ခုလုံးကိုသတင်းကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်တွင်မည်သူမဆို, ထိန်းချုပ်မှုဖန်တီးဖို့နဲ့ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ကို virtual စတူဒီယိုနှင့်တိုးပွားဂရပ်ဖစ်များနှင့်ရာသီဥတုဂရပ်ဖစ်, ရှိသမျှကို အသုံးပြု. တင်းပလိတ်များအပါအဝင်အပြည့်အဝရထိပ်တန်းသတင်းထွက်ကစားနိုင်သည့်အားဖြင့်တစ်ဦးပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာမြင်ကွင်းရှုပ်ထွေးနည်းပညာနှင့်အမှန်တကယ်ဇာတ်လမ်းပြောပြလုပ်နေကြသူဂျာနယ်လစ်များအကြားကွာဟချက်ကိုကျဉ်းမြောင်း။ အဆိုပါ CAMIO ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ကို virtual ဂရပ်ဖစ်များနှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ့် prompter စာသားကိုရိုက်ထည့်အဖြစ်နည်းတူလွယ်ကူပါတယ်။ သဘာဝကျကျဒီ်လုပ်ငန်းအသွားအလာလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျော့ကျစေပါတယ်ပေမယ့် template ကို-based ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းသတင်းသမားတွေဇာတ်လမ်း၏ဂရပ်ဖစ် element တွေကိုကျော်မကြုံစဖူးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။
မိတ်ဆက်ခြင်း: တိုက်ရိုက်အားကစားကွင်းတင်ဆက်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကုန်ပစ္စည်း Portfolio ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖန်ဆင်းခြင်း Inc ကို, အားကစားကွင်းတင်ပြချက်များနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပြုစုသူများ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူ, ChyronHego ယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ A / V ကိုဖျော်ဖြေရေးထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှိပ်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုမိသားစုပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းကနေအထိကုန်ကျ-ထိရောက်သောနှင့်အော်ပရေတာ-ဖော်ရွေစွမ်းရည်ပေးများနှင့်အချက်အလက်ပေးပို့, ဂရပ်ဖစ်မျိုးဆက်နှင့်အော်ဒီယိုအကြောင်းအရာပေးပို့ဖို့ပြန်ဖွင်စဉ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, High-ဖိအားတိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှု enviroments မှာ၎င်းတို့၏အာဏာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်လူသိများကြသည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အတွက်ဂရပ်ဖစ်, ပလေးအောက်နှင့် Real-time data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူတွဲလိုက်တဲ့အခါ ChyronHego'' s ကိုထုတ်ကုန်မိသားစု, နှိပ်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခုအဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဝေလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
တိုက်ရိုက်အားကစားအသံလွှင့်အဘို့, ChyronHego စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Paint telestration နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေရှင်းချက်ထုတ်ကုန်များဆုရရဲ့ Virtual နေရာထားရှိမိသားစုနှင့်ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်, LyricX များအတွက်ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးဖြေရှင်းချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအပြည့်အဝ 4K ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဖြည့်စွက်ကာ, ChyronHego အဆုံးမှအဆုံးသို့အားကစားနယ်ပယ်တွင်ဘဏ်ဍာများအတွက်တိုက်ရိုက် Arena မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စံဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်အပြေး, ဒီ All-software ကိုဖြေရှင်းချက်တိုက်ရိုက်စာစီပေါင်းစပ် ChyronHego'' s ကိုLyric®ဂရပ်ဖစ်, လူမှုရေးမီဒီယာအယ်ဒီတာကြွေးကြော်သံနှင့် Hybrid ကိုစက်ရုပ်ကင်မရာ-ဦးခေါင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ အဆိုပါရလဒ်ကင်မရာဖြတ်တောက်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလည်စည်း-ins အပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုနယ်ပယ်တွင်ပြပွဲ, ထုတ်လုပ်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ၏ဆုံးဖြတ်ချက်-Agnostic features တွေ ChyronHego tools တွေကြီးမားဗီဒီယိုကိုပျဉ်ပြား၏ပုံမှန်မဟုတ်သောရှုထောင့်အချိုးအပါအဝင်မည်သည့် Resolution, ထောကျပံ့ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်သည့်နယ်ပယ်တွင် setting ကိုအတွက်အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။
Channel ကိုတံဆိပ်တပ်နှင့် ticker
ChyronHego ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများတသတင်းကဏ္ဍ Solutions ကနေ NewsTicker ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုဂရပ်ဖစ်များအတွက် State-Of-The-Art ဖြန့်ကျက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ NewsTicker ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်အတူ, သတင်းဘဏ်ဍာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောယုံကြည်မှုအဘို့တိကျမှု, ဒေတာ-မောင်းနှင်, Real-time ticker ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီဂုဏ်ယူစွာဥရောပစျေးကွက်မှ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပလေးအောက်စနစ်, Channel ကိုထောင့်ကွက် Prime မိတ်ဆက်။ Prime တစ်ခု All-သစ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံ rendering engine ကိုနှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ channel ကို-ပူစျေးကွက်မှအစဉ်အဆက်ကုမ္ပဏီရဲ့အများဆုံးစွယ်စုံရာပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။
ChyronHego အဆိုပါ Metacast ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကုမ္ပဏီ၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရာသီဥတု data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်တိုက်ရိုက်-to-air ရာသီဥတုဂရပ်ဖစ်တင်ဆက်မှုဖြေရှင်းချက် feature ပါလိမ့်မယ်။ ပြပွဲမှာ Metacast ၏ပျေါလှငျတသတင်းကဏ္ဍအတွက်မည်သူမဆိုရာသီဥတု-based သတင်းသရုပ်ဖော်ပုံများကနေအပြည့်အဝရာသီဥတုဂရပ်ဖစ် rundown မှအရာအားလုံးကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်အဆိုပါ meteorologists ကနေကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချခွင့်ပြု, အ CAMIO ဠာသို့ယင်း၏ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းရေးဖြစ်လိမ့်မည်။
ChyronHego, Vector Capital ၏တစ်အစုစုကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများ, နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံ, သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထူးပြု, ChyronHego Lyric®, ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချထားဖြေရှင်းချက်အချို့ကမ်းလှမ်း; အဆိုပါ All-သစ်ကို CAMIO ဠာသတင်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းအသွားအလာ; နှင့် TRACAB "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ optical အားကစားခြေရာခံခြင်းစနစ်များအတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ClickEffects, ဂရပ်ဖစ်ထုတ်ကုန်များ၏အရှိဆုံးသက်သေပြချက်များနှင့်စွယ်စုံအားကစားကွင်းထုတ်လွှင့်မိသားစု။ Melville, New York မှာရုံးချုပ် ChyronHego ထို့အပြင်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဒိန်းမတ်, ဖင်လန်, ဂျာမနီ, မက္ကစီကို, နယ်သာလန်, နော်ဝေး, စင်္ကာပူ, စလိုဗသမ္မတနိုင်ငံ, ဆွီဒင်, နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ရုံးတွေရှိတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ChyronHego, ယခုခရီးစဉ် www.chyronhego.com.
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego Metacast
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego_Metacast.zip
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego CAMIO
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-CAMIO4AssetManager.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego Hybrid ကို Virtual စတူဒီယို
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-HybridVirtualStudios.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: VidiGo တိုက်ရိုက်စာစီ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-VidiGoLive.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego ပနျးခြီရေးဆှဲ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-Paint.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego Channel ကိုထောင့်ကွက် Prime
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-ChannelBoxPrime.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: ChyronHego NewsTicker ရွေးကောက်ပွဲ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-NewsTicker.jpg
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/[အီးမေးလျ protected] ကုမ္ပဏီရပ်တည်ချက် 23.D2016 အတွက်% 7IBC11 မှာခင်းကျင်းပြသရပါလိမ့်မယ်ထုတ်ကုန်ကိုကြေညာ - goo.gl/sqnwac
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CAMIO ဠာ ChyronHego ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဂရပ်ဖစ် IBC2016 Newsticker ပနျးခြီရေးဆှဲ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-07-18
ယခင်: GPL Technologies က, NVIDIA SIGGRAPH 2016 မှာ Virtualization နှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူ Tools များပြရန်မှ
နောက်တစ်ခု: စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Riedel ဆက်သွယ်ရေးငှားရမ်း Dave Caulwell အရှေ့အမေရိကန်များအတွက်အခန်းက္ပ